HomeWararka MaantaJovetic Oo Ku Eedeeyey Tababare Pellegrini In Uu Abaabulay Shirqool lagu dilayo
Laacibka kooxda Manchester City ee Steven Jovetic ayaa eedayn aan hore loo arag huwiyey tababarihiisa Mauel Pellegrini kadib markii uu ka reebay ciyaartooyada kooxda uga qayb geli doona tartanka Champions League.
Laacibkan ayaa tababarihiisa ku eedeeyey in uu shirqoolayo isla markaana uu dilayo mar haddii uu ka reebay kooxda Champions League ciyaaraysa, isaga oo ka door biday ciyaartooyada cusub ee kooxdaas ku soo biiray bishii hore ee January.
Weeraryahan u dhashay wadanka Montenegro oo 18 bilood ka hor ay City kaga soo iibsatay Fiorentina lacag dhan £22million ayuu tababare Pellegrini ka saaray qorshihiisa isaga oo ka door biday Wilfrield Bony oo bil ka hor uga soo wareegay Swansea.
Jovetic ayaa ku adkaystay in uu tababaruhu ku sameeyey khalad weyn markii uu ka reebay Chamipions League, isla markaana wixii hadda ka dambeeya aanu ka fikiri doonin mustaqbalkiisa in uu siiyo kooxdan.
25 jirkan oo u warramay wargeyska Daily Mirror, ayaa waxa uu hadalkiisa ku bilaabay sidan:
“Waan u qalmaa in aan ciyaaro Champions League, waanan ogahay, tababaruhun wuu i dilay markii uu go’aanka gaadhay. Waxa aan dareensahay in aan u qalmo booskayga dadka kalena sidaas ayay igu yidhaahdeen.
“Dadku waxay ii sheegaan in aan ciyaartoy wanaagsan ahay, laakiin waxa caddaatay in aanu tababaruhu sidaas oo kale u fikiraynin.
“Aad ayaan uga niyad jabay, xattaa hadda waan niyad jabsanahay. Ilama aha in uu go’aan wanaagssan ahaa ama go’aan sax ah.
“Waan ogahay in aan u qalmayay in liiska la igu daro, tababarahana waan u sheegay, laakiin wakhti uu igu dhegaysto ima siinin. Anigu waxa aan halkan u imid in aan ciyaaro Champions League” ayuu yidhi weeraryahanka Jovetic.
Laacibkan oo ay bishii January xiisanayeen kooxaha Talyaaniga ah ee Inter Milan iyo Juventus ayaa waxa uu xusay in aanu wali go’aan ka gaadhin mustaqbalkiisa, uuna sugi doono illaa xagaaga soo socda.
“Tababaruhu ciyaartooyo kale ayuu iga horreysiiyey, waana farriin ii muuinaysa waxa uu iga damacsan yahay.
“Way adagtahay in aad qaadato marka ay arrintan oo kale kugu dhaco balse xirfadle ahaan waxaan rabaa in aan tuso in aan si fiican u ciyaari karo xili-ciyaareedkan.” Ayuu raaciyey.
Waxa uu xusay in toddobaadkii tegay oo dhan uu ka fikirayay sidii ay kooxdiisa isaga celin lahayd Barcelona kulanka Champions League ee toddobaadka dambe.
Isagoo arintaas ka hadlayana Jovetic wuxuu yidhi: ‘Todobaadka oo dhan waxaa iga qaatay ka fikirka ciyaartaasi, markaanu Barcelona la ciyaarayno waxay ila noqotay oon ka fikiray inay aniga igu adkaan doonto.
‘Waxaan u malaynayaa inaan kooxda ka caawiyey ciyaaro adkaa wakhtigii Groups ka, taas darteedna, Waxaanan ku faraxsanayn in anigii dibada la i dhigo.
‘Sanadkan, iyo markastoon ciyaarayoba, waxaan u malaynayaa inaan shaqo fiican qabto. Shan gool baan dhaliyey horyaalka the Premier League anigoon daqiiqado badan xataa garoonka ku jirin.
‘Waxaan ogahay in dhamaantayo aanu niyad jabsanahay, waxanina waa kubad – laakiin imika aniga si weyn bay ii damaqday xaaladani.’
Lukaku Oo Naadigiisii Hore Ee Chelsea Ka Reebay FA Cup + Sawiro
12/03/2016 Abdiwahab Ahmed
HIGHLIGHTS: Leyton Orient 2-2 Chester
Barcelona oo Xalay dhalisay goolkii 500-aad ee Champions League iyo Messi Oo Nasiib u helay in uu saxeexo